Famakafakana ny Huawei Nova Plus, fitaovana iray hahagaga anao | Androidsis
Alfonso de Frutos | | Huawei, hevitra
Huawei gaga tamin'ny fanolorana ny fianakaviana Nova vaovao nandritra ny famelabelarany tamin'ny fanontana farany an'ny IFA any Berlin. Fantsona maromaro, ny Huawei Nova sy Huawei Nova Plus, izay mahatafiditra ny afovoany an-tampon'ny sehatra ankehitriny.
Tamin'ny fotoana efa nanehoanay anao ny fiheveranay voalohany taorian'ny fitsapana ny Huawei Nova Plus tao amin'ny IFA 2016, tonga izao ny fotoana hanaovana a fanadihadiana feno momba ny Huawei Nova Plus aorian'ny fampiasana iray volana. Telefaona iray izay namela antsika fahatsapana tena tsara ary lasa mpirotsaka hofidiana hanjakazaka ny eo afovoany ambony amin'ny tsena.
1 Volavola izay mahasarika ny maso rehetra amin'ny famaranana lehibe
2 Toetra mampiavaka ny Huawei Nova Plus
3 Fandefasana HD feno izay mihoatra ny antenaina
4 EMUI 4.1 mifanaraka tsara amin'ny Huawei Nova Plus
5 Batterie maharitra sy maharitra
6 Fakan-tsary iray mamiratra amin'ny haavon'ny tsara indrindra
6.1 Ohatra fakan-tsary natao tamin'ny Huawei Nova Plus
7 Fehiny farany
8 Galerie Huawei Nova Plus
10 Isa manohana
11 Hevitra manohitra
Volavola izay mahasarika ny maso rehetra amin'ny famaranana lehibe
Huawei dia manohy miloka amin'ny tolotra terminal misy famaranana premium ary ny Huawei Nova Plus dia ohatra vaovao amin'izany. Ny terminal dia manana vatana aluminium izay manome ny kalitaon'ny fitaovana.doka Ny fahatsapana eny an-tànana dia tena mahafinaritra Ary na eo aza ny famaranana metaly, tsy mora misosa ny telefaona, zavatra tiako indrindra satria tiako ny mitondra an'ity karazana terminal ity nefa tsy misy fonony.
Mariho fa efa nandinika ny telefaona aho nandritra ny iray volana ary tsy niaritra mariky ny akanjo na dia, araka ny nolazaiko taminao aza, ampiasaiko tsy misy sarony. Toa mitazona tsy misy olana ny terminal. Marihina fa, na eo aza ny fisian'ny efijery 5.5-inch, dia finday tena mora ampiasaina ny Huawei Nova Plus.
Ny tsiambaratelo dia ao anatin'ny refy kely misy azy mba ho phablet: ny Huawei Nova Plus Fepetra 151.8 x 75.7 x 7.3mm noho izany dia mitovy amin'ny Samsung Galaxy S7 Edge izy io. Mazava ho azy, raha manana tanana kely ianao dia mila tanana roa hampiasa azy io. Ary tsy afaka manadino ny lanjany ambany 160 grama isika, fahombiazana tokoa raha jerena ny habeny sy ny fitaovana ampiasaina hananganana telefaona.
Ny aloha dia ampiasaina tsara. Amin'izany fomba izany dia manana ny Nova Plus zana-kazo kely dia kely fanolorana a efijery isan-jaton'ny 72.6% raha oharina amin'ny alohan'ny terminal. Eo an-tampony no ahitantsika ny fakantsary eo anoloana 8 megapixel, raha eo ambany kosa dia ho hitantsika ny anaran'ilay marika.
Andao hanohy hiresaka momba ny sisin'ny terminal. Eo amin'ny ilany ankavanan'ny Huawei Nova Plus, ny mpanamboatra dia nampifangaro ny fanaraha-maso ny volume sy ny bokotra mandeha ary ny telefaona. Ny bokotra dia manolotra làlana tsy mihoatra ny marina, ankoatry ny fanolorana fahatsapana faharetana lehibe. Toy ny mahazatra dia manana fahasarotana ny bokotra herinaratra mba hanavahana azy amin'ny lakilen'ny fanaraha-maso.
Eo amin'ny ilany ambany no misy ny fivoahan'ny telefaona mpandahateny, mikrô ary Seranan-tsambo USB Type-C, raha ny lafiny ambony kosa dia ho hitantsika ny fivoahan'ny jack 3.5 mm. Ary farany, ny lafiny ankavia dia teo amin'ny toerana nahitan'izy ireo ny lovia hametahana karatra SIM nano sy karatra micro SD.
Mifindra any aoriana dia hitantsika izany Ny Huawei Nova Plus dia manana rivotra mankany amin'ny Huawei Mate 8. Ny famolavolana ny fakantsary sy ny sensor sensor an'ny dian-tànana, miaraka amin'io endrika toradroa io dia mampatsiahy ny phablet lehiben'ilay mpanamboatra. Misy antenaina raha mieritreritra isika fa ny Nova Plus dia mametraka ilay fakantsary mitovy amin'ilay zokiny lahy.
Eo amin'ny farany ambany sy any an-tampon'ny any aoriana no ahitanao ny sasany tarika plastika izay nametrahan'ny mpanamboatra ny antennas. Tiako manokana ny volavola ampiasain'ny Huawei P9, Fomba iray an'ny HTC One M10, saingy azoko tsara fa amin'ny terminal eo anelanelany dia tsy maintsy mampihena ny vidiny any ho any izy ireo.
Farany, lazao fa ny sisin'ny telefaona misy finday dia mahatonga ny fampiasana ny Huawei Nova Plus mahazo aina kokoa. Raha fintinina, famolavolana manaraka ny tsipika voamarika ao amin'ny fantsona hafa an'ny marika ary miditra amin'ny masonao, indrindra rehefa mandray ny telefaona ianao ary mahatsikaritra ny kalitaon'ny famaranana.
Efa nolazaiko anao fa nandritra ny fotoana nandramako azy io dia tsy nanana olana tamin'izany aho, tsy ela akory aho vao zatra ny habeny ary manararaotra ny herin'ny terminal sy ny kalitaon'ny ny efijery mba hankafizany ny atiny multimedia sy lalao video tsy misy olana. Bebe kokoa raha raisintsika ny fahaleovan-tena tsy mampino an'ny Huawei Nova Plus, araka ny ho hitanao aoriana.
Toetra mampiavaka ny Huawei Nova Plus
lafiny 151.8 x 75.7 x 7.3 mm
Operating System Android 6.0.1 Marshmallow eo ambanin'ny sosona EMUI 4.1
Fakan-tsary aoriana 16 megapixels miaraka amin'ny f / 2.0 27 mms / OIS / autofocus / detection face / panorama / HDR / Dual LED flash / Geolocation / 1080p fandraisam-peo amin'ny 30fps
Fakan-tsary mialoha 8 MPX / horonan-tsary ao amin'ny 1080p
Fitaovana hafa rafitra famerana haingana / Finger sensor sensor '/ Type C port
bateria 3.340 mAh tsy azo esorina
vidiny 372 euro misy amin'ny Amazon
Mahagaga fa tsy nanapa-kevitra ny hiera amin'ny vahaolana manokana i Huawei mba hanomezana fiainana ny fianakaviana Nova vaovao, saingy tokony holazaiko fa ny Snapdragon 625 miaraka amin'ny RAM 3 GB avelany hiasa tsara ny Huawei Nova Plus.
Ny terminal miasa tena milaminaTsy mijaly noho ny fikolokoloana izany ary, araka ny hitanao tamin'ny fanadihadianay ny horonantsary, ny Huawei Nova Plus dia afaka mamindra lalao, na toy inona na toy inona herin-tsary ilainy, tsy misy olana lehibe.
nyManaraka ny mason'ireo modely Huawei hafa manome sensor hafainganam-pandeha tsy mampino sy tonga lafatra ny sensor an'ny dian-tanana. Izy io dia mamantatra ny dian-tananay amin'ny voalohany amin'ny alàlan'ny fanokafana ny efijery amin'izao fotoana izao. Ity dia iray amin'ireo antsipiriany tiako indrindra momba ny terminal an'ny marika satria ny sensor biometrika azy dia tsy isalasalana fa iray amin'ny tsara indrindra eny an-tsena. Ankoatr'izay, ny toerana misy ny mpamaky ny rantsantanana, ao aoriana, dia manamora ny fampiasana azy.
Raha hametraka saingy, ny mpandahateny hita eo ambany dia manasa antsika handrakotra azy rehefa mampiasa lalao, kapoka amin'ny telefaona avo lenta ary manana vahaolana sarotra izany. Farafaharatsiny mba tsara ny kalitaon'ny feo, manasa antsika hahita atiny multimedia. Toa izany ny fifanarahana tamin'i Harman Kardon dia tena nifanaraka tamin'ny Huawei Nova Plus.
Fandefasana HD feno izay mihoatra ny antenaina
Ny Huawei Nova Plus miakatra a Tontonana IPS 5.5 inch Mahatratra ny vahaolana Full HD (1920 x 1080 teboka) sy ny hakitroky ny 401 teboka isaky ny santimetatra. Fanapahan-kevitra izay manara-penitra eo amin'ny tsena mid-range ambony ary izany dia mihoatra ny ampy.
ny loko maranitra toa tsara miaraka amina elanelana mihoatra ny marina sy mahavoky izay mifanaraka amin'ny antenaina. Ho fanampin'izay, toy ny fanao amin'ny faran'ny marika, manana safidy hifanaraka amin'ny mari-pana loko hifanaraka amin'ny mpampiasa izahay, manolotra toerana roa voalamina (ny iray mangatsiaka ary ny iray mafana). Tiako ilay avy any amin'ny orinasa satria tsy miandany izy io, saingy tsara raha afaka manamboatra ity masontsivana ity isika.
Momba ny famirapiratana, 450 nitsena Miaraka amin'ny ananan'ny mpanamboatra azy ireo dia mihoatra ny mahafeno ny andrasana izy ireo, manolotra ambaratonga mihoatra ny ampy amin'ny tontolo rehetra. Tsy mahomby indraindray ny fanitsiana mandeha ho azy, fa tsy misy vidiny ny manitsy ny famirapiratanana amin'ny tanana.
Lazao izany el Huawei Nova Plus dia manao tsara eny ivelany, azontsika atao ny mahita ny atin'ny efijery amin'ny andro migaingaina tsy misy olana lehibe, na dia tsy mahatratra ny maranitra hita amin'ny fantsona hafa aza izany. Fa raha heverina fa eo afovoany avo dia avo noho ny ampy ny famirapiratana.
Mikasika ny mizaha zoroIreo dia mihoatra ny marina, na dia misy mamirapiratra kely aza very, tsy mihoatra ny mahazatra izy ireo, ka tsy hahasosotra izany raha ampiasaina amin'ny fomba mahazatra.
Matetika aho no mamaky amin'ny alina ary tena tiako ny maody "fiarovana ny maso", azo alaina avy amin'ny takelaka fikirakirana etsy ambony. Atỳ Fampaherezana amin'ny maso manivana hazavana manga hanamaivanana ny havizanana hita maso, ka ho hitan'ny efijery amin'ny endrika mavo kokoa izy. Safidy izay efa nampiasaiko be dia be ary tena tsara ho ahy izany, na dia tsy maintsy zatra an'io feo efijery vaovao io aza ianao.
Mazava ho azy fa raha vao zatra izany dia fitaovana tena tsara io. Izaho dia mampiasa an'ity maody ity hahafahako mamaky teny tsara rehefa mandeha fitateram-bahoaka, mba hahazatra anao amin'ilay hevitra. Ho famaranana, ny efijery an'ny Huawei Nova Plus dia mihoatra ny marina, mihoatra noho ny fanatanterahana ny andrasan'ny ankamaroan'ny mpampiasa.
EMUI 4.1 mifanaraka tsara amin'ny Huawei Nova Plus
Hatramin'ny herintaona lasa izay, EMUI dia sosona tena mavesatra ary nisy fiatraikany tamin'ny traikefan'ny mpampiasa izany, saingy niaraka tamin'ny Honor 7 dia nahatsikaritra fiovana tsara be aho tamin'ity lafiny ity. Ankehitriny miaraka amin'ny fahatongavan'i EMUI 4.1 dia manamarina fanatsarana miavaka amin'ny interface manokana an'i Huawei.
Toy ny mahazatra EMUI tsy manana vatasarihana fampiharana Fa kosa, mampiasa rafitra birao misy endrika iOS. Mikasika ny tsiro amin'ny loko, tiako manokana ity rafitra ity ary efa zatra izany aho, ka tsy manan-kianina aho. Ny varavarankely fampandrenesana dia ahafahantsika, amin'ny alàlan'ny swipe midina voalohany, haneho andianà hitsin-dàlana izay azontsika ampifanarahana amin'ny tanana mba hisafidianana ireo safidy ampiasainay indrindra.
Tsy dia be loatra ny apps efa napetraka mialoha, azontsika atao ihany koa ny manaisotra azy ireo tsy misy olana ka tsy misy hokianina aho. Hitako fa tena ilaina ireo fihetsika knuckle hanaovana hetsika hafa. Tokony ho azonao ilay izy, lazaiko aminao fa sarotra tamiko izany, fa raha vao azonao tsara ny mekanika dia tena ilaina izy io, indrindra ny safidy fanaovana paompy indroa haka pikantsary na fanaovana tsipika eo amin'ny efijery. ampandehano ny maody fitaratra maro.
Amin'ity fizarana ity, na dia marina aza fa tiako bebe kokoa ny Android madio satria raha mila fanamboarana aho dia hitady mpandefa tsara, lazao fa EMUI 4.1 dia mitondra tena tsara manolotra plus de originality miaraka amin'ny rafitry ny fihetsika miaraka amin'ireo knuckles.
Batterie maharitra sy maharitra
Amin'ny taratasy, ny Bateria 3.340 mAh Mihoatra noho ny ampy ny fanohanana ny lanjan'ireo fitaovan'ny Huawei Nova Plus ary aorian'ny fampiasana azy dia nahagaga ahy izany. Amin'ny andro mahazatra Nody niaraka tamin'ny bateria 40% aho, zavatra tsy nahazatra ahy ary tena tiako. Mba zatra ilay hevitra, andro nanomezako tehina bebe kokoa amin'ny telefaona mankafy lalao video mitaky fandaniam-bola be dia be, namarana ny andro tamin'ny alàlan'ny bateria 25 -30% ny telefaona
Tena ilaina izany ny fitaovana dia hampitandrina amin'ny alàlan'ny default anao izay apps mihinana be loatra manasa antsika hanidy azy, zavatra tena ilaina hitehirizana kely kokoa amin'ny fizakantenan'ny telefaona. Azontsika atao ny manamboatra ity masontsivana ity amin'ny tanana amin'ny alàlan'ny famoronana lisitry ny rindranasa izay tsy hampandrenesina noho ny fanjifana be dia be vokariny. Ohatra, manana an'ity lisitra fotsy WhatsApp, Spotify ity sy ireo lalao izay ampiasaiko indrindra.
Tongava inona Ny bateria Huawei Nova Plus dia iray amin'ireo tanjaka lehibe amin'ity terminal ity Izy io dia manana USB Type C sy rafitra famahana haingana. Mazava ho azy fa ny famerana haingana dia haingana satria ny fandoavam-bola feno dia ao anatin'ny adiny telo monja, ratsy kely kokoa, bebe kokoa raha raisintsika fa ny famandrihana finday mandritra ny antsasak'adiny dia mahatratra 25-30% ny bateria, mihoatra noho izay esory maika izahay.
farany ny Huawei Nova Plus dia manana maody fitehirizana ultra izay hampavitrika ireo safidy fototra indrindra sy ny famirapiratana farafaharatsiny mba hamelomana ny telefaona maharitra miaraka amin'ny batterie farafahakeliny farafahakeliny.
Fakan-tsary iray mamiratra amin'ny haavon'ny tsara indrindra
Nandritra ny fanolorana ireo mpikambana vaovao ao amin'ny fianakavian'i Nova, nanamafy ny fisehoan'ny fakantsary ilay mpanamboatra. Marina izany. ny Fakan-tsary megapixel 16 Ny Huawei Nova Plus izay misy stabilisation sary optika, Dual flash ary f / 2.0 dia manolotra fisamborana tena tsara.
Ny sary nalaina dia tena tsara miaraka amin'ny loko mazava sy maranitra, indrindra amin'ny tontolo mazavava tsara izay mampiseho ny fahaizany feno ny fakantsary Huawei Nova Plus. Efa ao anaty trano isika mahita ny tsy fahampian'ny saturation kely, na dia mbola tsara aza ny kalitaon'ireo fakana sary.
Ny toerana mampijaly indrindra ny fakantsary Huawei Nova Plus dia ny maka sary alina. Amin'ity tranga ity dia miseho ny tabataba ary, na dia marina aza fa manampy ny tselatra dia tsy afaka manantena fahagagana ihany koa isika. Fa raha fintinina dia efa nolazaiko anao izany ny fakantsary dia iray amin'ireo tanjaka lehibe an'ity Huawei Nova Plus ity.
Amin'ny lafiny iray, ny fakantsary eo anoloana 8 megapixel dia hahafaly ireo tia tena satria mahomby ny fisamborana sasany. Hitako ny safidy hanazavana ny efijery tena ilaina alohan'ny fakana sary mba hanazavana ny sary nalaina tamin'ny fakantsary anoloana, rafitra tsotra izay manome valiny tsara, mamonjy anao amin'ny olana mihoatra ny iray, indrindra amin'ny tontolo tsy dia mazava loatra.
Amin'izany rehetra izany dia tsy maintsy ampiantsika rindrambaiko fakantsary tena feno. Ny fampiharana dia tena feno tokoa, manolotra andian-safidy izay mahatafiditra zavatra maro azo atao. Ny manamarika indrindra dia ny maody amin'ny alàlan'ny tanana izay ahafahantsika manitsy ny masontsivana isan-karazany toy ny fitrandrahana, hafainganam-pandeha, fifandanjana fotsy, ISO ary mifantoka amin'ireo safidy hafa.
Raha hainao ny maka sary ny fakan-tsarin'ny Huawei Nova Plus dia manome anao trangan-javatra tena mahaliana. Raha sanatria tsy zava-kanto ny haitao maha-mendrika anao dia matokia fa ny fakantsary fakan-tsarimihetsika amin'ny maody mandeha ho azy dia mihoatra ny ampy. Mazava ho azy, mamporisika anao aho hilalao mandritra ny fotoana fohy amin'ny fomba fampiasa amin'ny tanana mandra-pahazoanao azy satria mahatalanjona ny tsy fitovizan'ny sary.
Ohatra fakan-tsary natao tamin'ny Huawei Nova Plus
Huawei dia nahavita asa tsara tamin'ny Huawei Nova Plus. Est est est tsara tarehy tokoa ny terminal ary rehefa raisinao izany dia hitanao ny kalitaon'ny famaranana. Ny fitaovana ampiasainy dia hahafahanao mankafy atiny multimedia na lalao video tsy misy olana, ankoatran'ny efijery 5.5-inch dia manasa anao hanao izany ary raha manampy an'ity fakantsary faran'izay ambony sy fahaleovan-tena tena tsara ity aho, heveriko fa ity telefaona ity no fitaovana tsara indrindra ambony afovoany eny an-tsena ary hahatratra ny andrasan'ireo mpampiasa be fangatahana indrindra. Ary ambonin'izany dia manana Radio FM izy!
Ny hany saingy hitako dia ny toeran'ny mpandahateny, olana sarotra vahana raha tsy apetrakao eo aloha ny mpandahateny mampitombo ny haben'ny telefaona, ary ny famirapiratana eny ivelany izay ahafahantsika mahita ny efijery tsy misy olana fa izany dia mijanona ho zavatra fohy raha ampitahaintsika amin'ny telefaona hafa.
ihany Manamafy ny tenako aho amin'ny filazako fa iray amin'ireo telefaona tsara indrindra andrana aho ary afaka manome toky aho fa izany dia fividianana entana izay tsy handiso fanantenana anao, indrindra raha jerentsika fa misy ao izany Amazon amin'ny vidiny 372 euro. Huawei dia mitantana tsikelikely ho lasa mpanamboatra tsara indrindra amin'ny tontolon'ny Android ary, taorian'ny fahatafintohinan'i Samsung tamin'ny Galaxy Note 7 dia miha mazava amiko fa na ho ela na ho haingana dia handray ny laharana voalohany manerantany ny mpanamboatra aziatika avy amin'ny mpifaninana lehibe indrindra aminy. , nahazoana alalana avy amin'i Apple.
Galerie Huawei Nova Plus
Ny fakantsary dia manome fampisehoana tena tsara
Fahaleovan-tena hahagaga anao
Vidim-bola tsy hay tohaina
Ny efijery dia mijaly kely amin'ny tontolo mamiratra
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » Fanadihadiana momba ny Huawei Nova Plus, fitaovana iray izay hahagaga anao
Manohana ny tafika an-dranomasina izahay dia hoy izy:
iza koa no mahazo an'io?
Valin-kafatra manohana ny tafika an-dranomasina
Ity no Samsung Galaxy C9 manaraka